Malachite chrysocolla waxay sameysay wareegyo qurux badan oo buluug iyo cagaar ah - fiidyow
Iibso dukaankayaga dabiiciga ah ee chrysocolla malachite
Malachite iyo chrysocolla waxaa loo sameeyay si ay u abuuraan goobo qurux badan oo midab leh oo midab leh cagaar qoto dheer leh. Ama wareegyo cagaar ah oo dhexmara korantada buluugga ah.
Chrysocolla waa macdanta loo yaqaan 'phyllosilicate macdanta' oo la hubo.
Chrysocolla waxay leedahay midab buluug cagaaran oo buluug ah waana macaash yar oo naxaas ah, oo ay adagtahay 2.5 ilaa 7.0. Waxay asal ahaan asal ahaan tahay waana qaabab aaggyada unugyada jirka ee jirka. Macdanta isku-xidhka ah ayaa ah "quartz, limonite, azurite, malachite, cuprite, iyo macdanta kale ee macdanta" copper "ka ah. Waxaa caadi ahaan loo arkaa botryoidal ama duugyo wareegsan iyo jajaban, ama buuxinta xididka. Midabkeeda khafiifka ah awgood, mararka qaarkood waxaa lagu jahwareeraa turquoise.
Sababta oo ah waxoogaa caan ah oo ka badan turquoise, jiritaankiisa ballaaran, iyo muuqda, midab buluug qurux badan iyo midab buluug buluug ah, chrysocolla waxay caan ku ahayd u ​​isticmaal ahaan sidii dhagax qurux badan oo looxyo iyo adeegsiga qurxinta ilaa qarniyadii hore.
Malachite waa macdanta carbonate hydroxide macdanta. Qalabkan macdanta leh, ee macdanta cagaaran ee buluugsan ee nidaamka monoclinic crystal, badanaana wuxuu sameeyaa qaababka loo yaqaan 'botryoidal', fibrous, ama stalagmitic mass, oo ku jira jabka iyo qoto dheer, meelaha dhulka hoostiisa ku yaal, halkaas oo miiska biyaha iyo dareeraha hydrothermalku ay bixiyaan dariiqa roobka kiimikada. Kirismasyada shaqsiyeed waa dhif, laakiin waxay u dhacaan sida ugu yar ee xabsiyada u gaarka ah. Pseudomorphs ka dib markii kaniisado badan oo tabeello ah ama dhejisyo ah oo loo yaqaan 'Azurite crystals' ay sidoo kale dhacaan.
Chrysocolla malachite macnaha
Labada gemstones waxay isku daraan tamarta firfircoon ee firfircoon ee cagaaran ee Malachite oo leh tamarta jilicsan iyo isku dheelitirka buluuga Chrysocolla. Waxay baabi'isaa daciifnimada iyo cabsida waxaana loo isticmaali karaa in lagu saleeyo oo lagu nadiifiyo goobaheena tamarta leh. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xanuunka caloosha, oo ay ku jiraan kuwa kuxiran nidaamka taranka iyo kuwa sababay calool istaagga. Dhagaxa ayaa la sheegay inuu si gaar ah ugu wanaagsan yahay daaweynta cudurada la xiriira walaaca fekerka.
Chrysocolla malachite, oo ka timid Congo, Afrika